Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Eswatini Breaking News » Wadahadalka Eswatini waa la wada ogolaaday
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Montigny oo uu iska leeyahay Neal Rijkenberg wasiirka maaliyada ee hada ee Eswatini waxaa gubay dibadbaxayaal careysan
Daraasiin dad ah ayaa ladilay, goobo ganacsi iyo dhismayaal dowladeed oo burburay, cabsi ay nolosha ka qabaan booliska iyo shacabka. Qof walba hada wuu ogolaaday xalka in la hadlo.
Iyadoo Internet-ka la xiray kaliya macluumaadka dhinac saddexaad ayaa ka soo qulqulaya Boqortooyada Eswatini. Waddan caadi ah oo nabdoon ayaa la macaamilaya rabshado iyo dilal qorsheysan, waxaana laga yaabaa inay yihiin muhaajiriin shisheeye.
Koox ka mid ah muwaadiniinta niyadjabsan, ku-simaha ra'iisul wasaaraha, iyo beesha caalamka ayaa ku boorrinaya wada-hadal dhexmara dhammaan dhinacyada iyo joojinta rabshadaha iyo falal dambiyeedyada, sida burburinta meheradaha, dhaca, iyo dilka.
Gabadha Boqorka ayaa BBC-da ku xaqiijisay wareysi ay la yeelatay Focus Africa, in ay u maleyneyso in Boqorka uu diyaar u yahay dhageysiga.
Waxay umuuqataa inuu jiro dhaqdhaqaaq xalaal ah oo nabadeed oo ay dhigayaan mudaharaadayaasha doonaya isbedelka Eswatini. Dhexdooda mudaaharaadayaas waxaa ku sugan dambiilayaal raba inay wax xadaan, dilaan oo wax burburiyaan. Iskuday in la kordhiyo waa saraakiisha booliiska oo iyaguna naftooda u baqa. Si looga sii daro waxaa sii xumaanaya danaha siyaasadeed ee shisheeye ee loogu talagalay in lagu dhiiri geliyo iskahorimaad.
Sida loogu dusay eTurboNews xubnaha sare ee dowlada, iyo xubin sare oo ka tirsan Ururka Dalxiiska Afrika, waxay umuuqataa in kooxaha shisheeye ee kacdoonka wada ay ka howlgalayeen Eswatini bilowgii isku dhacan. Qaar ka mid ah kuwan kacdoonka shisheeyaha ah ayaa xiray waddooyinka, iyagoo ku labisnaa dharka booliska, waxayna dileen muwaadiniin si booliska loogu eedeeyo. Wadaag ah eTurboNews Kaasoo ka cararay Eswatini horaantii toddobaadkan, wuxuu arkay dhaqdhaqaaqyo sidan u xun markii uu ku qasbanaaday inuu maro waddooyinka dhinacyadiisa isagoo isku dayaya inuu gaaro xadka Eswatini iyo Koonfur Afrika.
Sida laga soo xigtay ah eTurboNews warbixin, hal awood oo wada shaqaaqadan ayaa umuuqata mid xiriir la leh daacadnimada Eswatini iyo boqortooyada oo ilaalinaysa xiriirka diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Shiinaha, oo loo yaqaan Taiwan. Waxay ka careysiineysay Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha sanado badan. Eswatini waa dalka kaliya ee Afrikaan ah ee leh safaarad Taiwan.
Safaaradda Mareykanka ayaa si muuqata loo arkay si loo taageero howlaha Taiwan iyo Eswatini.
Wareysiga BBC Focus Africa la yeelatay gabadha boqorka
In kasta oo loo baahan yahay in la ogolaado banaanbaxyo nabadeed oo sharci ah, haddana xaaladda ayaa cirka isku shareertay waxayna noqotay nolol iyo geeri run ah oo loogu talagalay qof walba, dibadbaxayaasha, dowladda, iyo inta kale ee dadka reer Eswatini.
eTurboNews waxaa maqlay sarkaal ka tirsan booliska Eswatini. Waxay u baqday nafteeda iyo nolosha qoyskeeda daqiiqad kasta. Sida ay sheegayaan wararka, muwaadiniinta Eswatini waxay si isku mid ah uga baqaan booliska. Waa waqtigii la hadli lahaa.
>> bogga xiga si aad inbadan u aqrisato >>